NESHA oo dayactir ka wada wadada laamiga ah ee u dhexeysa Garoowe & Gaalkacayo & Cabasho laga muujiyey (Warbixin). • Horseed Media
You are here: Home / Somali News / Puntland News / NESHA oo dayactir ka wada wadada laamiga ah ee u dhexeysa Garoowe & Gaalkacayo & Cabasho laga muujiyey (Warbixin).
NESHA oo dayactir ka wada wadada laamiga ah ee u dhexeysa Garoowe & Gaalkacayo & Cabasho laga muujiyey (Warbixin).
September 22, 2012 - By: Abdirizak Shiino
Hay’adda u qaabilsan Dowladda Puntland Wadooyinka ee loo yaqaan NESHA/PHA (Puntland Highway Authority ) ayaa ka bilowday dayactir 5Km oo ka mid ah wadada laamiga ah ee dhexeysa Magaalooyinka Garoowe & Gaalkacayo.
PHA waxay sheegtay in ay Dayactir & balaarin ku samaynayso ilaa 10km oo ka mid ah wadadaas weliba goobaha ugu daran ee uu saameeyey burburku iyadoo muujisay baahida ay u qabto inay gacan dhaqaale u fidiyaan Ganacsatada, Qurba joogta & Qaybaha kale ee Bulshada reer Puntland.
Dakhliga PHA & Waajibaadkeeda Shaqo.
PHA waa Hay’ada madax banaan oo hoos tagta Madaxtooyada waxayse xiriir wada shaqayneed la leedahay Wasaaradda Hawlaha Guud & Gaadiidka, Waajibaadkeeda shaqo ayaa ah sidii ay ugu samayn lahayd wadooyin Gobolada & Degmooyinka waxaa kale oo ay u xilsaaran tahay sidii ay dayactir joogta ah ugu samayn lahayd wadooyinka ka baxsan magaalooyinka dhexdooda (Wadooyinka mara magaalooyinka dhexdooda waxaa u xilsaaran D/hoose) & inay u samayso wadooyinka calaamadihii hagayaasha dareewalada gaadiidka.
Hay’adatani waa mid ka mid ah Hay’adaha ugu dakhliga badan Dowladda Puntland waxay ku leedahay lacago dulsaar ah Birmiilkasta oo shidaal ah oo ka soo dega Dekeda Puntland, Gaadiidka cusub & Dhamaan qalabka gaadiidka ee loo soo dhoofiyo gudaha Puntland lacagahaas oo ay u qabato Wasaaradda Maaliyadu kadibna ugu wareejiso Xisaab uga furan Bandhiga dhexe, waxay kale oo lacago ku leedahay canshuuraha bilaha ah ee laga qaado gaadiidlayda.
Waxaa intaas u sii dheer curaar (%) looga qoondeeyey Misaaniyadda Guud ee Dowladda taas oo ka dhigtay hay’ada mid ay u soo xeroodaan bilkasta dhaqaale aad u farabadan iyadoo ka hesha lacago deeqo ah Hay’adaha Qaramada Midoobay sida ILO.
Ma isu dheeli tiran yihiin Dakhliga PHA & Waxqabadkeedu.
Hay’adan waxaa bishii soo gala lacago fara badan oo isugu jira lacago dulsaar ah oo ay qaado, qoondayn uga timaada Misaaniyada guud & Deeqo ay ka hesho Hay’daha qaar hase yeeshee maahan wax isu dhigma Dakhliga farah badan ee soo gala Hay’adda & Waxqabadkeedu.
PHA ma muuqdo waxqabad la taaban karo oo ay ka qabatay dayaca & burburka ka muuqda wadada laamiga ah ee isku xirta Puntland marka laga reebo meelaha qaar oo ay ku buuxisay ciid mana gaarsiisna waxqabadkeedu Deegaanada kale ee Puntland marka laga tago wadada laamiga ah.
Ma Laami baa Caro lagu caleeyaa!!? Sheki la muujiyey.
Jajabka Wadada Laamiga ah oo lagu buuxinayo CIID (Caro cas).
Hay’adu waxay sheegtay inay dayactir balaaran ka samaysay 10km oo ka mid ah Wadada laamiga ah ee u dhaxaysa Garoowe & Gaalkacayo hase ahaatee dadku waxay leeyihiin meelaha ay Hay’adu wax ka qabatay ma dhaafsiisna 4km.
Dareewaladda Gaadiidka isticmaala wadadaas waxay u sheegeen Horseed Media meelaha ay Hay’adu wax ka qabatay in aysan u hagaajin sidii la rabay waxay xaqiijiyeen in Hay’adu u adeegsanayso inay ku buuxiso meelaha Jajaban & Go’dadka CIID (Caro) halkii ay ahayd inay isticmaasho Daamuur & Jay.
Waxay isku raaceen in meelo horay Hay’adu sidan oo kale u hagaajisay aysan sii jirin mudo dheer markiibana ay sidii hore ku noqdaan.
Dad badani waxay is weydiinayaan PHA xaq ma u leedahay inay Bulshada weydiisato kaalmo dhaqaale iyadoo aan la ogeyn halka ay marisay dhaqaale fara badan oo uga soo xerooda canshuuraha Dowladda?.